COVID-19: Maxuu yahay macnaha uu aniga ii leeyahay Amarka Guri Joogida ahi? | LawHelp Minnesota
Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section.
COVID-19: Maxuu yahay macnaha uu aniga ii leeyahay Amarka Guri Joogida ahi?
Markii ugu dambeysay ee wax la soo geliyey: 2020/6/8
Meelahee furan hadda?
Ganacsiyo badan ayaa hadda furan laakiin waxa ay leeyihiin shuruudo xadidaad ah oo ku saabsan inta qof ee meesha joogi karta markiiba. Hadii shaqadaaddii dib laguugu yeeray, waa aad shaqo tagi kartaa. Xafiisyada dhaqtarada caadiga ah iyo kuwa ilkahuba waa furan yihiin. Qaar ka mid ah xeryaha dhalinyaradda, goobaha ciyaarahu waa ay furan yihiin hadda waxa ayna bilaabeen tababaradoodii. Hawlaha dibada ah waa la ogol yahay sameyntooda laakiin qaar badan oo ka mid ah hawlaha gudaha ah lama ogola.
Xasuusnow in dad kale iyo adiga ay masaafo badani idiin dhaxayso hadii aad gurigaaga dibada uga baxdo. Maaskarada wajiga si weyn ayaa laguugu dhiirigalinayaa inaad xirato mar kasta oo aadan guriga joogin oo aad dibada ku sugan tahay. Gaar ahaan, meelaha gudaha ah. Ganacsiyada ama beelaha qaarkood waxaa dhici karta inay kaa rabaan inaad xirato maaskaro.
Ka waran hadii aan leeyahay balan maxkamadeed oo soo socota?
Weli waa aad tagi kartaa dhagaysiga dacwadaada maxkamada. Maxkamado badani hadda waxa ay dacwadaha ku dhageystaan fiidyow ama telefanka. Eeg akhbaartayada ku saabsan Maxkamadaha Minnesota Minnesota Courts, Immigration, iyo Maxkamadaha Dowlada Dhexe Federal Court. Ka hor inta aadan aadin dhageysiga maxkamadaada, wac qareenkaaga hadii leedahay mid. Waxaad sidoo kale wici kartaa maxkamada dhagaysiga dacwadaadu ay ka dhacayso. Waydii in waqtigii ama maalintii dhagaysiga dacwadaada la badalay. Shaqaalaha maxkamadu waxa dhici karta inay kuu sheegaan in dhagaysiga dacwadaada lagu qaadi karo fiidyow ama telefan iyo in kale.
Ka waran hadii aanan amaan ku dareemayn gurigayga?
Hadii wax degdeg ahi ay jiraan, wac 911. Hadii wax laguu geystay ama lagugu tacdiyey wac, khadka Minnesota Day One Crisis Hotline ee 1-866-223-1111. Waxa ay kaa caawin karaan inaad ka hesho caawimaad, amaan iyo gargaar hesho.
Dhamaan kiisaska la xiriira dagaalka qoyska dhexdiisa ahi waa noocyada leh “Mudnaanta Sare”. Wali waa aad xareysan kartaa amarada ka celinta ah (restraining orders) ama amaan siinta (orders for protection). Waxaa dhici karta in degmadaaddu leeyahay xeerar gaar ah oo ku saabsan sida makamaxadda loogu tago tan. Hadii aad dareemaysan amaan la’aan, waxa aad wici kartaa Xafiiska Legal Aid ka.
Ka waran hadii aan ahay hoy la’aan?
Hadii aad hoy la’aan tahay, sharciga Guriga Joogidu (Stay at Home) ma uu ku qabanayo. Laakiin, helida meel aad ku noolaato waxaa dhici karta inay kaa caawiso inaad iska dhowrto in cudurku kugu dhaco. Magaalooyin badani waxa ay isku dayayaan inay u helaan hoyo siyaado ah oo la kala duwan dadka u baahan xilligan lagu jiro qalalaasaha cudurkan dillaacay. Beeshaadu waxaa dhici karta inay bilowday barnaamij cusub ka dib markii kuugu dambaysay ee aad isku dayday inaad guri hesho. Ka wac, United Way Lambarada 211 ama (651) 291-0211 si aad u ogaato.
Ka waran hadii aan ku tala-gal-sanahay inaan guuro mudadda waqtigan gudaheeda?
Gudoomiyada Gobolku waxa uu jaa amar ku siiyey mulkiileyaasha guryaha laga kireysto inaysan cid guri ka saari karin waqtigan xaaladda dedgeg ahi ay jirto. Eeg bogga akhbaartayada ku saabsan arrimaha guryaha xilligan cudurku dilaacay (See our information page for housing issues during the pandemic). Hadii jaa ay kuu sii qorsheysnay inaad guurto, wali waa aad sameyn kartaa taa hadii aad u sameynayso baahi la xiriirta caafimaadkaaga ama amaankaaga.
Ha sii joogin gurigaaga hadii amaan la’aani ka jirto. Wac Xafiiska Gargaarka dhanka Sharciyada ee deegaankaaga Legal Aid office markiiba hadii aad doonayso inaad amaankaaga awgii u guurto. Hadii aad u baahan tahay meel amaan ah oo aad caawa ku hoyoto, wac Khadka Qalalaasaha Maalinta Koowaad (Day One Crisis Line) ee ah 1-866-223-1111, ama dhambaal (text) u dir 612-399-9995, ama gal shabakada dayoneservices.org.
Maxaa dhici hadii aanan u hogaansamin xeerarkaas?
Waxaa lagugu soo eedeyn karaa dambi (misdemeanor) darajada koowaad ah hadii aad si ‘kas’ ah aad u jabiso amarka Guri Joogida ah. Dambigaa (misdemeanor) darajada koowaad ah wuxuu keeni karaa ciqaab ah ganaax ama xabsi. Kas ah, macnaheeedu waad ogayd xeerka laakiin waa jabisay hadana.
Ka waran shaqadeydii?
Meelaha qaarkood waa furnaan doonaan. Hadii aad u shaqeyso goobaha daryeealada caafimaadka, hay’adaha sharci ilaalinta, meelaha cuntada, warbaahinta, tamarta, biyaha iyo qashinka ama warshaha laga huraanka ah, weli waxaa dhici karta inaad shaqo aadi karto. La hadal qoladda shaqadaadda.
© 2019 Adeegyada Sharciyada ee Gobolku Gargaaraa waa mashruuc uu leeyahay Is-bahaysiga Adeegyada Sharciyada ee Minnesota (MLSC)